🥇 ▷ Mi 9 Lite ✅
Xiaomi Mi 9 Lite waa taleefan casriga ah oo leh fasalka dhexe ee hadda jira. Qalabkani wuxuu u taagan yahay shaashaddiisa 6.39-inji oo leh dareenka faraha ee isku-dhafan iyo kamarado gadaal ah oo saddex-gees ah 48 MP + 8 MP + 2 MP.
Muujinta – Processor – Xusuus – Kamarad – Batteriga – Qiimaha – Fiidiyaha
Qaabkani wuxuu leeyahay shaashad 6.39-inji ah oo leh Samsung AMOLED panel. Xalka ayaa ah FHD + 1080 x 2340 pixels wuxuuna leeyahay cufnaanta shaashadda oo ah 403 ppi. Marka loo eego iftiinka waa 600 nits wuxuuna leeyahay isbarbardhig heer sare ah 60000: 1. Waxa kale oo ay u oggolaaneysaa daawashada HDR, waxay leedahay midab kala duwan oo NTSC ah oo ah 103.8% iyo hab habeenkii. Qalabka sawirka faraha ayaa ku dhagan shaashadda wuxuuna leeyahay qaab aqrin leh oo leh nal buluug ah. Faahfaahinta xiisaha lihi waxay tahay inay leedahay ilaalin Corning® Gorilla® Glass 5 iyo daboolka ka hortagga saliida iyo faraha faraha. Marka loo eego saamiga shaashadu waa 91% wuxuuna leeyahay xakamaynta dhalaalaya qalabka DC oo leh gariir yar iyo daal indhaha.
CPU-ka Xiaomi Mi 9 Lite wuxuu ka socdaa soo saaraha ” Qualcomm ” kiiskan waa Snapdragon 710. processor-kaan waxaa lagu soo saaray hanaanka 10 nm wuxuu leeyahay 8 koofiyad wuxuuna shaqeeyaa ugu badnaan 2.2 GHz. Marka laga hadlayo Graphic processor-ka wuxuu la imanayaa Adreno 616.
Telefoonkan casriga ahi wuxuu la imanayaa xusuusta gudaha ah ee 64 GB ama 128 GB GB wuxuuna ku qalabaysan yahay RAM oo ah 6 GB LPDDR4X saacadda 1866 MHz. Dhanka kale waxay u oggolaaneysaa fidinta xusuusta oo leh kaararka microSD illaa 256 GB. Waxaan lahaan laheyn labo kaladuwanaansho:
64 GB oo ah xasuusta gudaha oo leh 6GB oo RAM ah.
128 GB oo kaydinta gudaha ah oo leh 6GB RAM.
Kaameeraha gadaal ee moodalkan wuxuu leeyahay dareeme sadex ah oo ah 48 MP + 8 MP + 2 MP oo leh Flash flash. 48-ka xildhibaanka ah wuxuu kujiraa qalabka korantada ee Sony lens wuxuuna leeyahay aperture f / 1.79. 8 MP-ga waa muraayad xagal ballaadhan leh oo 2 MP ah waa kamarad 2 MP ah. Waxaa ka mid ah xulashooyinka la taageeray waxaan leenahay: hab caqli ballaaran xagal ballaadhan, sawir gacmeed deggan oo xasillan, qaab sawir leh qaab dhalaal, Muuqaal Panorama, saacad sawir, heer, qaab duug ah, aqoonsi wajiga, HDR, qaabka quruxda leh AI, sirdoonka sirdoonka leh AI, hagaajinta dhaldhalaalka ballaaran ee geeska ah, sawir sawir kooxeed hagaajin, sumad gaar ah, dib u habeyn iftiin leh oo qaab muuqaal ah, iftiin iftiin leh oo leh AI, Ilayska Studio oo leh AI iyo AI ee loogu talagalay sawirrada xalka sare.
Ilaa hadda kaamirada hore, waa 32 MP leh f / 2.0 aperture ah iyo howlaha AI ah. Hawlaha ay taageerayaan waxaa ka mid ah: Sawirka muuqaalka leh AI, sawir-gacmeedka sawir-gacmeedka, muuqaalka shaashadda oo dhameystiran, Palm Shutter, HDR, hagaajinta iftiinka shaashadda, saacadda Selfie, garashada wajiga, Xaaladda qurxinta leh AI, goobta shaqada AI, qurxinta AI, muuqaalka AI iyo Nalalka istuudiyaha AI.
Bateriga wuxuu ka samaysan yahay lithium-ion polymer, lithium-ion oo leh awood dhan 4,030 mAh. Sidoo kale marka loo eego arrintan waa in la ogaadaa in ay la jaan qaadaya soonka 18 W ee degdegga ah.
Xidhiidhka Wi-Fi, wuxuu taageeraa borotokool: 802.11a / b / g / n / ac dual band wuxuuna leeyahay taageero Wi-Fi Direct. Xawaaraha ugu badan ee xawaaraha deg degga ah ee shabakadaha LTE waa 800 Mbps isir ahaan iyo 150 Mbps oo ah galinta. Marka loo eego Bluetooth, nooca uu yahay 5.0 hadana wuxuu la socdaa GPS oo leh A-GPS, Galileo, GLONASS iyo Beidou. Waxay kaloo leedahay NFC waxayna la jaanqaadi kartaa bixinta lacagta elektiroonigga ah ee Google Pay. Nooca isku xiraha aad adeegsato waa USB Type-C oo dib loo celin karo.
Telefoonkan casriga ahi wuxuu lahaanayaa qiimaha tafaariiqda oo ah 330 euro oo ah nooca 64 GB ah.
Xiaomi Mi 9 Lite wuxuu ku yimaadaa madow, buluug ama caddaan. Waa lambarada taleefannada ‘SIM laba’ laakiin booska labaad waa inaan kala dooranayaa microSD ama SIM2. Marka laga hadlayo nidaamka qalliinka waxay la imaaneysaa Android 9 Pie oo leh interface soo saaraha MIUI 10. Waxay kaloo leedahay shaashad gacmeed isku dhafan oo shaashadda ah, wejiga furidda ah iyo jaakadda mashiinka dhegaha ee 3.5 mm. Waxay sidoo kale leedahay xakameynta infakshanka, shaashadda leh Had iyo jeer-On mode iyo Game Turbo 2.0.
Waqtigan xaadirka ah ma haysanno fiidiyow rasmi ah oo telifoonkan ah.
Maqaalka Mi 9 Lite ayaa lagu daabacay MovilZona.